गर्न सके के हुन्न ? डिग्री पास मीनाले शिक्षण पेसा छोडेर खोलेको रोटी उद्योगमा ४८ लाख कारोबार… – Khabar PatrikaNp
गर्न सके के हुन्न ? डिग्री पास मीनाले शिक्षण पेसा छोडेर खोलेको रोटी उद्योगमा ४८ लाख कारोबार…
काठमाडौं । भारत, गुजरातको वडोदराका निवासी मीनाबेन शर्मा निजी स्कूलमा पढाउँथिन् । तलब पनि राम्रो थियो, तर उनीहरूले त्यो आफुले पाएजस्तो महसुस गरेनन् । किनकी उनी केहि फरक गर्न चाहन्थिन् जसकारण उनको पहिचान फरक बनोस् ।
दुई वर्ष अघि उनले आफ्नो जागिर छोडेर रोटी बनाउने र बेच्ने व्यवसाय शुरू गरिन् । उनको व्यवसाय १०० रोटीबाट सुरू गर्दै, आज व्यापार ४ हजार रोटीमा पुगेको छ । तिनीहरूको वार्षिक कारोबार झण्डै ४८ लाख रूपैयाँ रहेको छ । उनले धेरै महिलालाई रोजगार पनि दिइरहेकी छिन् ।
तलब राम्रो थियो, तर म अरू केहि गर्न चाहन्थें,
मीनाबेन भन्छिन्, ‘मैले स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरेकी छु ।’ उनी बडोदराको मुजम्मुडामा एमडी कर्पोरेशन नाम राखेर रोटी बेच्ने काम गर्दै आएकी छिन् । दुई बर्ष पहिले सम्म एक निजी स्कूल मा पढाउने उनी अहिले व्यवसायमा सफल भएकी छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘केही दिन पछि, म कामको साथ उर्बराउन थाले । त्यसपछि मैले सोचे म यस्तो काम गर्छु ताकि म एक आत्मनिर्भर बन्न सक्दछु र अन्य महिलाहरुलाई रोजगार दिन सक्छु । २०१८ मा, मैले पीएमआरवाई योजना अन्तर्गत बडोदरा जिल्ला उद्योग केन्द्रबाट ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ ऋण लिएँ र एउटा व्यवसाय शुरू गरें ।’
अधिकांश रोटी गुजरातमा खपत हुन्छ
रोटीको व्यवसाय सुरु गर्ने विचारका बारे मीनाबेन भन्छिन्, ‘रोटी हरेक घरमा बनाइन्छ । यो बिना, त्यहाँ कुनै खाना छैन । गुजरातको बारेमा कुरा गर्दा, भात सामान्यतया कम र रोटी यहाँ बढी बनाइन्छ । वडोदरामा नमकीनका थुप्रै किसिमहरू छन् ।
यो अब गृह उद्योगको हिस्सा भएको छ । मान्छेहरू घरमै नमकीनका विभिन्न किसिमका तयारीहरू गर्छन् र उनीहरूलाई पसल, रेष्टुरेन्ट र कम्पनीहरूको क्यान्टिनमा पुर्‍याउँछन् । धेरै थोरै मानिस रोटीको कारोबार गर्छन् ।
जब मैले अलिक अनुसन्धान गरेँ, मलाई थाहा भयो कि यसलाई व्यवसायको रूपमा लिन सकिन्छ । यो एक राम्रो क्षेत्र छ । विशेष गरी रोटी त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले सही खाना प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसलाई ध्यानमा राख्दै, मैले रोटी बनाउने र यसलाई बेच्ने सोचें ।’
पराठा–पुरी र थेप्लाले पनि आपूर्ति गर्छिन
जब उनको बर्ष २०१८ मा व्यापार सुरु भयो, यो १०० रोटीको साथ सुरू भयो । बिस्तारै, मान्छेको मागले व्यापार बढ्यो । उनी भन्छिन्, ‘अहिले म दैनिक ४ हजार रोटीहरू आपूर्ति गर्छु । अहिले मेरो कम्पनीमा १० महिला छन् । उनीहरुले केवल मेरो काम मात्र सजिलो बनाएका छैनन्, तर उनीहरूले रोजगार पनि पाएका छन् ।
त्यहाँ हाल दुईवटा रोटी बनाउने मेशिनहरू छन् ।’ उनी थप्दै भन्छिन्, ‘हाम्रो रोटी प्रायः औद्योगिक क्षेत्रको क्यान्टिनमा आपूर्ति हुन्छ । एउटा रोटीको मूल्य २.७० रुपैयाँ रहेको छ । अब मैले रोटी पराठा र थेप्ला रोटीको साथ अर्डर पनि लिन शुरू गरे, ताकि म व्यापारलाई अगाडि बढाउन सक्दछु ।’
थप नयाँ योजनाको बारेमा मीनाबेन भन्छिन् कि परिवारले रोटी बनाउने र बेच्ने व्यवसायमा पनि ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । खुःशी हुँदै उनले भनिन्, ‘यस समर्थनका कारण, व्यापार दुई बर्षमा यो चरणमा छ, जुन म अगाडि बढाउन खोज्दै छु । आउने दिनमा, त्यहाँ धेरै रोटी बनाउने मेसिनहरू बनाउने योजना छ, ताकि म धेरै ठूला अर्डरहरू लिन सक्दछु ।’
Prevजन्मदिनकै ५ दिन अघि भयो मरणदिन । २० लाख उठ्दा पनि बचाउन सकिएन् राजेशलाई…. (भिडियो)
Nextश्रीमान गुमाएर एक्लै भएकी सरस्वतीले दुइ छोराहरु मध्य एउटालाई सिए पढाउँदै छिन भने एउटा प्लस टु पढाउदै छिन !
हत्केलामा ‘एम’ आकार हुने पुरुष र महिलाको भाग्य कस्तो हुन्छ ? जानुहोस् !!!
चर्चित पात्र धुर्मुस, मुन्द्रे र माग्ने बुढाको पुरानो भिडियो यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस् …
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21233)